ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် Muk Chyik (မုတ်ကျိတ်)ကျေးရွာရှိ အသင်းတော်ပိုင် မြေနေရာအား မျိုးဆက်ကြယ်ပွင့် ကုမ္ပဏီမှ ငှက်ပျောစိုက်ရန် မြေနေရာချဲ့ထွင်လာသည့် ကိစ္စနှင့်တိုင်တန်းထားသည့် အမှုကို ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်တရားရုံးက ယနေ့ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုသည် Muk Chyik (မုတ်ကျိတ်)ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှ တာဝန်ရှိသူများက တရားလိုပြုကာ တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ထားသည့် အမှုဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့ အသင်းတော်က တရားလိုပြုပြီး တိုင်တန်းခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ တော့ ကုမ္ပဏီဘက်က တာဝန်ရှိသူ ၄ ယောက်ကို ငွေဒဏ်တစ်ယောက် ၁သိန်းစီနဲ့ အမိန့်ချခဲ့ကြတယ်။” ဟု တရားလိုပြုတိုင်တန်းခဲ့ကြသည့် အသင်းတော်မှ တာဝန်ခံ Slg. Dai Hkawng (ဦး ဒိုင်ခေါင်) က ခုလိုပြောသည်။
ယင်းအမှုကို လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဧပြီလတွင် အကျိုးဖျက်ဆီးမှု ပုဒ်မ ၄၂၇ ဖြင့် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက်လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ ပုဒ်မ ၄၂၇ နှင့်တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရပါက အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် ၃ လ သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် ကျပ် ၁ သိန်းပေးဆောင်ရသည်။ ယနေ့ချမှတ်ခဲ့သည့် အမှုသည် ငွေဒဏ်နှင့်အပြီးသတ် အမိန့်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသင်းတော်မှ တရားလိုလျှောက်ထားရာတွင် ဦးဆောင်သည့် Slg. Dai Hkawng (ဦး ဒိုင်ခေါင်) က ယခုလိုဆက်ပြောသည်။
“သူတို့ဘက်က အရင်တရားစွဲတယ်။ အဲနောက်မှာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှုာ နှစ်ဖက်လုံး အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုဖို့ ကျနော်တို့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘက်က ဖောက်ဖျက်ပြီး ကျနော်တိုိ့ကို တရားစွဲလာတဲ့တွက် ကျနော်တို့လည်း ပြန်ဆွဲရတာဖြစ်တယ်။“ ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစကာ မုတ်ကျိတ်ကျေးရွာသုိ့ ငှက်ပျောစိုက်ရန် တရုတ်ငွေရှင်၊ ကြေးရှင်များနှင့် မျိုးဆက်ကြယ်ပွင့် ကုမ္ပဏီက ဝင်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အသင်းတော်ပိုင်မြေနေရာများကိုပါ ကျူးကျော်ပြီး ပြုလုပ်လာသည့်အတွက် အသင်းတော်မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရွာသူရွာသားများက ယင်းကဲ့သို့ မပြုလုပ်ရန်သွားရောက် ကန့်ကွက်ခြင်းမျိုး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သွားရောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် တရုတ်ငွေရှင်၊ ကြေးရှင်များသည် ဆက်လုပ်လာခြင်း မရှိတော့ဘဲ မျိုးဆက်ကြယ်ပွင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသာ ဆက်လုပ်နေကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိတွင် မျိုးဆက်သစ်ကုမ္ပဏီမှလည်း တရားလိုပြုလုပ်ကာ မုတ်ကျိတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ တာဝန်ရှိသူများအား တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအမှုကိုတော့ ပုဒ်မ ၅ ခုဖြင့် စွဲဆိုထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးတွင် ရက်ချိန်းယူနေပြီး ပြည်နယ်တရားရုံးသို့ တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
နောင်းချိန်း သင်္ချုိုင်းနယ်မြေမှာ သဲကျောက် ပုံလာခြင်းကို ရွာသားများ...